Izingane ziweliswa ngabazali emfuleni - Ilanga News
Home Izindaba Izingane ziweliswa ngabazali emfuleni
Izingane ziweliswa ngabazali emfuleni
Bathi sekuphele iminyaka bephila le mpilo njengoba bengafakeliwe nje ibhuloho
SEKUPHENDUKE isinkwa sangemihla kubazali uma linile izulu ukuba bayowelisa izingane zabo umfula ngenxa yokubona impilo yezingane zabo isengcupheni ngenxa yokweswela ibhuloho. Bathi sekuphele iminyaka balicela kodwa lingakhiwa. IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
ZILENGELA engozini yokumuka nomfula uMsuluzi izingane zaseNhlawe, eWeenen okuye kudingeke ukuba njalo uma ziya noma zibuya esikoleni, ziweliswe ngabazali bazo noma abanye nje abantu bendawo ngenxa yokungabikhona kwebhuloho.
Sekuphenduke umsebenzi ongakhokheli kwabanye abazali ukuhlale beyolinda izingane uma ziphuma esikoleni ukuze baziwe-lise noma baziphelezele ekuseni uma ziya esikoleni.
Lezi zingane ezibalelwa ngaphezu kwekhulu, ezifunda ezikoleni ezahlukene kule ndawo; okubalwa iNhlawe Primary, iNkangala Secondary, iThandanani Primary neWeenen Combined, zibhe-kana nalobu bunzima mihla namala-nga, okuye kube yingozi uma izulu linile.
Ngokuthola kweLANGA, sekunesikhathi umphakathi ucela ukwakhelwa ibhuloho kodwa lokho kungenzeki. ILANGA livakashele le ndawo, lafica inqwaba yezingane ime ngaphesheya komfula, ilinde abazali ukuba bafike bayiwelise. Abazali abakhulume neLANGA, bathi kuba nzima kakhulu uma imvula inile, kangangoba bayaye bangaziyisi izingane esikoleni ngoba kusuke kungaweleki.
Kwenye indawo lapho kuwela khona esezikhule kancane, kuyadingeka ukuba izingane zikhumule bese zingena emanzini. UNkk Salephi Mthethwa, onezingane ezintathu, okumele njalo ziwele lo mfula uma ziya esikoleni noma zibuya khona uthe usekwenze kwaba wumsebenzi wakhe lokhu.
“Izingane zami ziphakathi kweminyaka ewu-9-15. Sike silale umfula ungagcwele kakhulu, kodwa sivuke ekuseni kungasahambeki, bese kuphoqeleka ukuba izingane zingayi esikoleni kuphele cishe isonto lonke zihleli ekhaya silinde ukuba amanzi abohle.
“Kuba nzima kakhulu ehlobo uma kunezimvula ngoba umfula ugcwala ngokweqile. Besicela ukuba iziphathimandla zisilekelele kungaze kwenzeke umonakalo,” kusho uNkk Mthethwa. UNkk Nonhlanhla Dladla onezingane ezimbili ezifunda eNhlawe, uthi uncamela ukuba ahlale alinde izingane zakhe emfuleni ngenxa yokwesaba ukuthi zingamuka nomfula.
“Kunzima kakhulu kule ndawo, sekukaningi sicela usizo kodwa kuyabonakala ukuthi akekho ozimisele ngoku-sinaka, yingakho sibona kungcono siziwelisele izingane zethu,” kusho yena.
UMnu Lucas Mandla Mvelase, oyikhansela kule ndawo, uthi naye usenze yonke imizamo ukucelela umphakathi wakhe ibhuloho. Uthi kunzima kakhulu lapho kuwela khona izingane esezikhulile ngoba kudingeka ukuba zikhumule, zingene emanzini.
“Uma ungabona ukuthi izingane ziwela kabuhlungu kanjani, ezinye zize zingqongqoshane ukuze ziwe-le ngoba ezinye izikole zingenhla, okwenza ezinye izingane ziwele lapho kushona khona kakhulu. Ngizamile ukubhalela ihhovisi loMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal, kusenguMnu Willies Mchunu ungqongqoshe, kodwa lutho. Yingakho ubona abantu benza lokhu, ngisho izimoto ziwela kanzima uma imvula inile,” kusho uMnu Mvelase.
Okhulumela uMnyango wezoku-Thutha KwaZulu-Natal, uMnu Kwanele Ncalane, uthe umnyango uyaluqonda usizi olubhekene nemiphakathi eminingi esezindaweni zasemakhaya. Uthe bayaqhubeka nokwakha ama-bhuloho angaphezu kwalawa asebewakhile.
Uthe ungqongqoshe wezokuThutha, uMnu Bheki Ntuli nowezeMfundo, uMnu Kwazi Mshengu balusukumele udaba lokufika kwabafu-ndi ezikoleni bephephile, yingakho abangu-59 000 bethuthwa mahhala nsuku zonke. Zonke izinhlaka ziyalelwe ukuba zibonelele izikole ezinabafundi abawela imifula.
Previous articleIsazi samasiko siyakhala ngokungalandelwa kwesintu
Next articleBakhala ngocansi “oluphazamisa abafundi”